Ikhaya / Amanzi okugeza / Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza / WOWOW Indlu yangasese Sink Faucet Brush Nickel Isakazekile
Kulinganiselwe ngo- 4.94 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 18 izilinganiso ikhasimende
2321300 imiyalo yokufaka
SKU: 2321300 Categories: Amanzi okugeza, Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza Tags: umcengezi wokuxubha, imbobo emithathu yokulahla, Kugcwele
Lena umpompi obukeka kahle. Kuqhubeke lula (sebenzisa imiyalo) futhi kwafika namapayipi kanye ne-pop.up drain. Le pop up yokuqala engibe nayo. Cabanga ukuthi ngizoyithanda. Mhlawumbe ngeke iqoqe izinwele eziningi futhi kufanele ihlanzwe. Kusezinsukwini ezimbalwa nje ngakho-ke awukwazi ukuphawula ngempilo ende. Ngingayi-oda futhi.
Imiyalo ehlelwe kahle futhi ecacile. Kufakiwe kahle. Intengo enkulu yompompi osakazekile. Ngiyajabula ukuthi ngizamile futhi ngeke nginqikaze ukuhlela kabusha lapho ngidinga enye. Irose kwaba ukuthinta okuhle
Ukulula kokufakwa, kuthathe cishe imizuzu eyi-15 - 20 ukuyifaka. Ngiwenzelwe i-DIY futhi sengineminyaka engaba ngu-70 ubudala kuthathe isikhathi eside ukugoba ngaphansi kwento engenamsebenzi futhi ngibuyele emuva kunokufaka. Ngemuva kokufakwa okuhloliwe futhi akukho ukuvuza kokukhipha noma kokuphakelayo. Uhlatshwe umxhwele kakhulu ngumkhiqizo. Ngenze uwoyela konke okufakwa yize ngenxa yokuthi kuthathe izinsuku ezimbili ukususa ompompi bakudala ngenxa yokuthi konke ukuxhumana obekubandayo bekufanele kusike umpompi omdala. Intengo nayo ibiyinto ebiziwe enengqondo kakhulu ngekhwalithi yomkhiqizo. Ukufakwa okulula kangaka akudingi ngisho nemiyalo enikeziwe.
Oompompi bahanjiswa futhi bafakwa namuhla. Ompompi Nice, cishe uhhafu wentengo Delta noma Price Pfister okulingana ezitolo ezinkulu ibhokisi. Angazi ukuthi bazobamba kanjani isikhathi eside kepha banokuzwa okuhle nokufakwa bekuqondile. I-pop up drain ibiyisici esihle kakhulu kule ntengo. Kudonswa inkanyezi eyodwa ngoba izikulufo ezimbili ezisetshenziselwa ukuqinisa isibambo esishisayo / esibandayo kusuka ngaphansi kwesibali besingekho. Ngafaka ngisebenzisa kuphela i-nut efakiwe kepha izikulufu zibalulekile ukukhiya isibambo futhi bezingekho kuphakethe.
Akubizi kakhulu, okwenziwe eChina nezikhombisi-ndlela azifani ncamashi nepompi kodwa… WOW !! Ngangimangazwa ikhwalithi yezinto futhi ukulula kokufakwa kwaba isimanga esamukelwa kakhulu. Ishintshe i-Price Pfister ebiza kakhulu ebese ingasebenzi ngaphakathi kweminyaka embalwa. Kungithathe amahora angu-5.5 ukwenza i-Pfister ikhishwe ngenxa yezinga lokugqwala nokugqwala- empeleni bekufanele ngizel isher ephezulu kusuka kusibambo samanzi ashisayo bese ngiyiphonsa ngenhla kosinki ukuze ngiyisuse. Ukufaka le faucet entsha yeWOWOW kungithathe ngaphansi kwehora elingu-1, akukho ukuvuza, ukubukeka okumangalisayo! Ithenge! Noma ngabe kuthatha unyaka noma emibili kuphela (engingalindela ukuthi ihlale isikhathi eside ngisho nangamanzi anzima e-AZ), ngubani onendaba? Ngale ntengo, thenga enye bese uyilahla ngokushesha. Ngingathanda ukuthenga lokhu futhi!
Benginokungabaza kwami ​​lapho ngifaka i-oda. Zazibukeka zizinhle impela, kepha njengoba ngingu-brand off ngangizimisele ukubabuyisa uma bezingeyona ikhwalithi. Kepha zibukeka zizinhle ngaphandle kwebhokisi, bekulula ukuzifaka nokusebenza kahle! Ngizokwazisa uma lokho kuguquka, kepha kuze kube manje angizisoli ngokuzithenga, futhi ngithenge amasethi ama-2 ngamampunge aphindwe kabili!
Le ompompi ngeke ifakelwe amanye amasonto amabili lapho kuqala kabusha. NOKHO, ngingakutshela ukuthi ukubukeka kukonke kompompi kukhulu ngempela futhi izingcezu ezintathu eziyinhloko zaziqukethwe ezitsheni ezihlukile zezindwangu. Ngithemba ukuthi lokhu kuyisibonakaliso sekhwalithi yalo mkhiqizo.
Kusinda kunalokho ebengikulindele. Kubukeka kukuhle kokuyize kwethu okusha. Ukufakwa okulula kakhulu, zonke izingxenye ezidingekayo zeza nompompi. Kutholakale okufanayo esitolo sethu sendawo kepha bekuyizikhathi ezintathu izindleko zalesi. Ungathenga futhi.
Ngivuselele indlu yami yokugezela ngokusha okuningi. Le ompompi yayiyikho kanye engangikufuna kodwa indlela yayisindiswe kakhulu ezitolo ezinkulu zebhokisi. Ngacishe ngazinza ngento engingayithandi ngaze ngathola lokhu. Manje ngijabule kakhulu.
Ngingusonkontileka futhi kufanele ngithi lezi yizinga elihle impela lentengo. Kulula ukuyifaka futhi yenziwe kahle kakhulu futhi yahlanganiswa. Umpompi ofanayo osezitolo ezinkulu zamabhokisi amakhulu uyinani eliphindwe kabili kunentengo.
Ngikuthande ngokushesha ukubukeka kwale ompompi. Ngisanda kuthenga ize futhi lokhu kubukeka kukuhle. Ngincoma futhi ngijabule kakhulu ngomkhiqizo.
Lezi ompompi zaziyilokho kanye ebesikudinga ukuvuselela indlu yethu yokugezela. Idizayini enhle nekhwalithi enentengo enhle nokulethwa okusheshayo.
Kufakiwe 2 in the bath room
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kahle ukwenza kanye instillation lula kakhulu. Imiyalo eyanele abakhombisanga ukufakwa kwensimbi yimicu ejwayelekile yepayipi likazwelonke. Kuzoba lula kakhulu ukulungisa noma ukufaka okunye esikhundleni ngenxa yendlela umpompi ovikeleke ngayo kuzokwenzeka ukuthi kususwe nge-screw driver nangeminwe yakho. Idizayini enhle
Ngifakile mayelana nabo bonke abakhiqizi bepompo ababiza isikhathi esingu-3-4 izindleko zalokhu- inekhwalithi uma ifakwa kahle noma ingcono- futhi bekujabule ngokuphelele ngokuthengwa
Inani elihle kakhulu. Ukubukeka okuyinkimbinkimbi kakhulu nomkhiqizo wekhwalithi ephezulu. Umpulamba wami wahlabeka umxhwele ngakho. Into enhle ngayo kimi isitobha sokuthinta - akukho plunger okufanele uyiphule!
Lena ompompi enhle kakhulu, futhi lukhulu. Uplamba wangibuza ukuthi ngikuthathaphi ngoba ubefuna ukuthenga okunye.
Umpompi omangalisayo futhi uzisongele emasakeni abo wendwangu ukuze bangaklwebhi - ngabe othile ungifakele yena wakuthola kulula kakhulu futhi nemiyalo icacile - babuze ukuthi banabo yini ompompi bokugeza ukuze bahambisane ngoba ngizobe ngiyala eyodwa!
Oompompi babekhwalithi enhle futhi babukeka bebahle. Ukufaka kuhambe kahle ngaphandle kwezinkinga. Ukuphela kwento engingayithanda ukuthi izintambo zokuhambisa amanzi ziqine kancane. Bekufanele uqaphele lapho uxhuma olayini bamanzi.